No. 5 I-Byron - Igumbi lokulala eliyi-1 Iflethi Yabucala - I-Airbnb
No. 5 I-Byron - Igumbi lokulala eliyi-1 Iflethi Yabucala
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguJohan
Le flethi okanye indlu ekwicomplex, yenye yeeflethi okanye izindlu ezikwicomplex ezilungiswe kakuhle zavulwa ngo-2016. Isibane esikhulu esisembindini weInverell 's CBD sinikezela ngendawo yokupaka esesitratweni yabucala kunye nendawo yokungena esuka kwisitrato i-Evans.
Ilungele isibini okanye umntu oyingcali oza e-Inverell xa eza kuhlala ixesha elifutshane okanye elide.
Kukho igumbi lokulala eliyi-1, ikhitshi, igumbi lokuhlambela, indawo yokuhlamba impahla, indawo yokuhlala evulekileyo kunye nendawo yokutyela kukho indawo eyaneleyo yokuphola kunye nendawo eqhelekileyo yangaphandle ene-BBQ.
Iflethi ibekwe kumgangatho wokuqala wesakhiwo se-Byron Arcade ibe inezitepsi neendawo zokungena eziphakamileyo. Isilingi ephezulu eneefestile ezinkulu iflethi inendawo yokuhlala evulekileyo enekhitshi elipheleleyo, indawo yokuhlala nokutyela, igumbi lokuhlambela elineshawa ephucukileyo nento eyenza kufudumale, indawo yokuhlamba impahla negumbi lokulala linebhedi enkulu etofotofo. Ikhanya kakhulu kwaye igcwele umoya obandayo okanye oshushu, iifeni zesilingi kunye nokufudumeza phantsi kwigumbi lokuhlambela. Indawo yokupaka engaphantsi ekhuselekileyo kunye ne-intercom.
Kufuphi neendawo zobugcisa zenkcubeko zaseInverell, iholo yedolophu, iivenkile zekofu ezikhethiweyo!
Emva kokuba uqokelele isitshixo sakho kuthi, unemfihlo epheleleyo kwigumbi lakho.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Inverell